प्रगतिशील लेखक सङ्घ, नेपाल: प्रगतिशील, प्रश्न र साहित्य - अभि सुवेदी
नेपालमा प्रगतिशील लेखक सङ्घका एक्सठ्ठी बर्ष पुगेछन् । बैसठ्ठी लाग्ने दिन मनाउन प्रलेसका अहिलेका अध्यक्ष साहित्यकार अमर गिरीले मलाई पनि फोनबाट निम्तो गरे । मलाई बोल्न आमन्त्रण गरेको केही नौलो लाग्यो। त्यसो त एउटा देब्रेढल्कुवा, कुनै दलस“ग तन्तु नगा“सेको प्राज्ञिक अराजक किसिमको मनुवालाई साहित्य विषयमा छलफल गर्न बोलाउनु साधारण कुरा हो । पहिलेका मेरा एकाध अनुभवको कारणले गर्दा मलाई जान मन लागेन तर यी बोलाउने मानिसको कारणले हुन्छ भने । प्रलेसका केही कार्यक्रममा पहिला पनि गएको थिए“ । अनुभवहरू छन् । त्यो एकेडेमीको हल, त्यही कोठो मेरो माक्र्सेली साहित्य डिस्कोर्सका अनुभवस“ग अनौठो किसिमले गा“सिएको छ । छयालीस सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि एउटा साहित्यिक कार्यक्रम गरिएको थियो । त्यो प्रलेसले गरेको थियो कि थिएन, सम्झना छैन तर सबैजसो प्रलेसकै साहित्यकार थिए त्यहा“ । मलाई अमुक लेखकमाथि बोल्न लगाइएको थियो । मैले नारीहरूको पक्षमा बोलेँ । पुरुष दृष्टिबाट प्रभावित सौन्दर्यशास्त्रका वाम वा दक्षिणपन्थका विचारहरूका केही कुरा पुनरावृत्ति हुन्छन् । आन्टोनियो ग्राम्चीले भनेजस्तो हामी त्यसैलाई मानिबस्छौँ र प्रश्न गर्दैनौ । त्यसलाई उनले हेजिमोनी भने । सबैले प्रश्न नगरी कुनै कुरा मानिबस्यौँ भने त्यो कालान्तरमा नैतिकता वा इथिक्स हुन्छ । त्यसरी इथिक्स भइसकेको पुरुषप्रधान हेजिमोनीमा प्रश्न गरेँछु । म बोलेर यता हलमा आएपछि युवाहरूले घेरे । मैले भने एउटा साधारण समीक्षाको स्वतन्त्र चर्चा गर्न नमान्नेले के प्रगतिशील साहित्यकार भएर हिँड्नु । फेरि महिलाको विषयमा मैले भनेको कुरा सोच्ने विषय होइन?’ युवक सुन्न तयार भएनन् । म वाल्ल परेँ । त्यत्तिकैमा बीचमा एकेडेमीको त्यो हलमा राख्ने गरेको डल्लो कुसनमा बसेकी पारिजात ती युवकहरूमाथि गर्जिइन् । के के भनिन्, तर यसो भनेको मेरो मानसमा अहिलेसम्म पनि गुञ्जिइरहन्छ—‘अलिक ध्यान दिएर सुन । सिक्नु पनि पर्छ‘ । म निकै असमञ्जमा परेँ । ती युवक शान्त भएर भीडभित्र पसे अनि मानिसका टाउकाबीचका ससाना खाली आकासबाट मलाई युवा र केही छक्क परेका आ“खाहरूले हेरेर बसे ।
मलाई पारिजातले भनेको कुरा दायित्व हो कि कर्म हो बुभ्mन गाह्रो भयो । मैले यी युवकलाई कहा“ गएर माक्र्सेली साहित्य सिकाउनु, र यसरी सिकाउने मेरो के हैसियत? म पार्टीको नेता वा चिन्तक हु“ र । उनले नभनेको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो । तर शिक्षक मानिस, युवकहरूलाई केही कुरा भन्नु, तिनका कुरा सुन्नु मेरो कर्म हो जसले मलाई सधैँ आनन्द दिएको छ । फेरि अर्को पटक पनि अकोँ ठाउ“मा त्यस्तै अनुभव भयो । अनि लाग्यो सायद अब म यसरी बोल्ने ठाउ“मा जानु हुदैन । अनि प्रलेसका कार्यक्रमको कदाचित् निम्तो आयो भने म हातमा टोपी लिएर भाग्न थालेँ । समस्या मेरो थियो प्रलेसको होइन । तर माओबादी युवाहरू भने अनौठा मानिस निस्के । ती बोलाउ“छन् र अर्को कुरा सुन्छन् । किन बोलायौ भन्यो भने ती भन्छन्, ‘ल, विश्वविद्यालय अङ्ग्रेजी विभागमा हाम्रै विचार लिएर तपाईंस“ग थेसिस् लेख्नु हुने, माक्र्सबादी सौन्दर्यशास्त्रको अध्ययन गरेको पुगेन यो यो पढ भन्ने, माओको साहित्य र कला विषयको भाषण पढेर आओ भन्ने अनि यो कार्यक्रममा किन बोलायौ भनेर किन सोध्ने? यो प्रतिप्रश्नले म झस्किन्छु । अनि भन्छु, ‘त्यसो त माक्र्सबादको साहित्यमा धेरै व्याख्या गर्ने र तीखा समीक्षा लेख्ने लिओन् ट्राटस्की पनि हुन्, तिनलाई पढ पनि त भन्छु नि म, अनि तिमीहरूले लौ यी त संसोधनबादी माक्र्सवादी हुन् भनेका फ्रेडरिक जेमिसन्, फ्र्याङ्कफर्क स्कृ्लमा माक्र्सेलीहरू, जर्ज लुकाचका समीक्षा पनि त पढ भन्छु नि’ । अनि ती मलाई उत्तर दिंदैनन् । ‘होइन, आउनुपर्छ‘ मात्र भन्छन् । त्यही क्रममा त्यही हलमा २ बैशाख २०७०मा माओबादी समर्थक साहित्यकारहरूको निम्तोमा इच्छुकप्रतिष्ठानको छलफलमा गएको थिए“ । त्यो बहसमा उत्तरवर्ती चेतना वा पोस्टालिटीका चर्चा भए । भारतका मैनेजर पाण्डेले समकालीन सौँदर्यबोधीय संदर्भमा उत्तरआधुनिकतावाद र माक्र्सवाद विषयमा लेखे, “जो सच्चा वामपंथी हुन र उत्तर आधुनिकतावादको रहस्यमयताको असली रूपलाई जनताका सामु ल्याउ“छन् उनीहरूलाई रुढिवाद—माक्र्सवादी भनिन्छ । मलाई लाग्छ समाजमा बुनियादी परिववर्तनको निम्ति उत्तर आधुनिकतावादी—माक्र्सवादीभन्दा रुढिवादी—माक्र्सवादी अधिक उपयोगी हुन्छ” । मलाई लाग्छ भारत र नेपालमा सङ्घमा आवध्द वा बाहिरै बसेका प्रगतिशील लेखकहरूको बीचमा चलेको बहसमा यही व्दैतता छ । बहुलवादी होइन एकलवादी हुनुपर्छ प्रलेसमा भन्ने जोड भेटियो । त्यो पनि पाण्डेकै विचारले उठाएको प्रश्नस“ग जोडिएको छ ।
दर्शनमा दुईवटा कुरा हुन्छन् । एउटाले भन्छ विचार र कर्मको निदानवादी सिध्दान्त वा ‘टेलियोलोजी’ हुन्छ । अर्कोथरिको विचारले भन्छ, होइन निश्चित अन्त्य कुनै पनि विचारको हुदैन । उनीहरू आफना विचारमा ठीक छन् र दृढ छन्, मैले बुभेmँ । आफनै समयतिर फर्किन्छु । मेरो साहित्यिक यात्रामा देव्रे ढल्कुवाहरूकै प्रभाव रहेछ । सानो एघार बर्षको हु“दा मलाई पहिलो देव्रे प्रभाव परेर लेखेको कविता बल्लभमणि दाइले वाराणसीमा लगेर ‘नौलो पाइलो’ पत्रिकामा छपाइदिएछन् । तारानाथ दाइ त्यसका सम्पादक रहेछन् । मेरो जीवनको पहिलो सिर्जनाको मुद्रण पनि का“शीबाटै भएछ । पछि मैले काठमाडौमा आइ.ए.को अध्ययनको सिलसिलामा आउ“दा श्यामप्रसाद दाइ र शशिकला दिदीलाई कमलपोखरीमा गएर भेट्न थालेँ । श्यामप्रसाद शर्माको व्यक्तित्व र सरल मानवतावादी विचारले अहिले पनि मलाई छुन्छ । अनि गोविन्द प्रसाद लोहनीका गंभीर माक्र्सवादी साहित्य र दर्शनका लेखनले अत्यन्त प्रभावित भए“ । कृष्णचन्द्रसिंह प्रधान, तारानाथ शर्मा, बल्लभमणि दाहाल, आनन्ददेव भट्ट र गोविन्द भट्टको प्रभावमेरो साहित्य अनुशीलनमा निकै प¥यो। तर मलाई लेख्ता जसरी मनले भन्छ त्यसरी लेख्नुपर्छ भन्ने कुराले कहिल्यै छोडेन ।साहित्यकार निरपेक्ष हुन्छ, अनि त्यो स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने मैले उमेरले जेष्ठ भतिज साहित्यकार पुण्य सुवेदीस“ग सिकेँ । उनले मलाईसाहित्य अध्ययनको कुनै सीमा कस्नु हुदैन भन्ने सिकाए । सायद म उनकै विचार लिएर बढेँ ।
मलाई सबै साहित्यिक विचारहरूले समात्छन् तर थोरैले जित्छन् । तर जीवन सजिलो भयो । म साहित्यको शिक्षक भए“ । उच्च अध्ययन गर्ने थलोको शिक्षक भएपछि व्यापक पढेँ । क्रम जारी छ । जे पनि पढ्नुपर्छ । मलाई माक्र्सेली विचार जति दर्शन र चिन्तनमा प्रभाव पार्ने अर्को दर्शन केही छ जस्तो लाग्दैन । त्यसले सबैथरिका दर्शन र चिन्तनलाई प्रभाव पारेको छ । नेपाल एउटा मध्ययुगिन र सामन्ती समाज हो । यस समाजका चरित्रको आलोचना गर्ने, वर्ग विभेदमाथि कलम चलाएर लेख्ने वामपन्थी लेखक नै हुन् । अर्को अर्थमा नेपालमा समयलाई अगाडि लानुपर्छ भनेर वोल्ने र लेख्ने लेखकहरू प्रगतिशील हुन् । तर उनीहरूका विचारहरू दलहरूस“ग जोडिएका हुनाले तिनका समस्या पनि दलहरूस“ग जोडिएकि त । कोही पनि कम्युनिस्ट हुन वामपन्थी लेखक हुनुपर्दैन, रेमन्ड विलियम्स भन्छन् । यी दुई कुरालाई सृ्त्र बनाएपछि समस्या जन्मिन्छन् । प्रगतिशील लेखक सङ्घका समस्या विषयमा भएका बहस र यस संस्थामा नेतृत्व गरेका लेखकका विचार हेर्दा प्रलेसको समस्या भनेको आफनो एउटा परिवेशबाट बाहिर जान नचाहनु हो । ‘के गर्दैछन् वाम लेखक’ (नागरिक १४ पुस २०६९) भन्ने खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको लेखमा यो विषय प्रष्टस“ग उठाएको पढेँ । त्यसैगरी युवा वामपन्थी कवि र सङ्गीतकार सङ्गीतश्रोताले ‘छ दशकको प्रगतिशील यात्रा’ भनेर कोसेली (५ असोज २०७०)मा लेखेको पढेपछि अरू कुरा खुले । देशभरिका ४० भन्दा बढी जिल्लामा शाखा भएको र झन्डै पा“च हजारभन्दा बढी सदस्य सङ्ख्या भएको प्रलेसलाई एक महŒवपृ्र्ण संरचना मान्नुपर्छ । तर यस सङ्ख्यामा कति दलिय लेखकहरूको संलग्नता छ भन्ने कुरा प्रलेसले नै जान्ने कुरा हो । मेरो विचारमा प्रलेसले धन्द्याउने कुरा तलका प्रश्नहरूले उजागर गर्छन्—कस्ता साहित्यकारमात्र पढ्ने भन्ने विषयमा स्थिर आधार बनाउ“नुपर्छ कि पर्दैन? साहित्यमा अनेकौँ विचार, जाति, लिङ्ग जसमा समलिङ्गी अध्ययन पनि छन्, तिनको साहित्यमा ठाउ“ हुने हुनाले तिनलाई ध्यानदिने बहुलवादी प्रलेसमा आउनुहुन्छ कि हुदैन?विद्याथीं संगठनहरू ठ्याक्कै दलहरूका भएर बा“डिएजस्तै प्रलेस कुनै पार्टी वा पार्टीहरूको ठ्याक्कै स“घ हुने कि नहुने?हिजोआज व्यापक रूपमा हुने साहित्यिक जात्रा र उत्सबहरूमा प्रलेसको सहज सहभागिता हुने कि नहुने? आपृ्mलाई हुनेहुने विचार मात्र सुन्नेकि अरू विचार पनि सुनेर छलफल गर्ने अनि ती सबैको प्रकाशन गर्ने? यी प्रश्नहरूलाई प्रलेसजस्तो प्रतिष्ठित लेखकको संस्थाले धन्द्याउनु पर्छ । हिजोको शैलीले आज काम दिँदैन कि त । पुरानो संस्था प्रलेसचाहिँ खुला नहुने अनि पछि आएका माओबादी युवा र लेखकका संस्थाहरू खुला हुँदै जाने कुरा यथार्थ भयो भने त्यसबाट केही सिक्नैपर्छ भन्ने मेरो विचार छ । त्यस दिन बोलेका विचारको नै प्रस्तुति हो यो । मेरा विचार पनि सुन्नु आवश्यक छ र? भन्ने अन्तिम प्रश्न हो ।
साभारः कान्तिपुर (१४ असोज २०७०)
Posted by प्रगतिशील लेखक सङ्घ, नेपाल at 12:24 AM